Teregiramu inodzima ICO yayo yakakwidza 1,7 bhiriyoni | Gadget nhau
Teregiramu inodzima ICO yayo mushure mekusimudzira 1,7 bhiriyoni emadhora
Imwe nguva yapfuura Teregiramu yakazivisa kupinda kwayo mumusika we cryptocurrency neGram. Kutanga chirongwa ichi, kambani yakaparura ICO (yekutanga mari inopa). Parizvino kwaive kuri kubudirira kubudirira nemari yakazara ye $ 1,7 bhiriyoni. Asi iyo kambani yaita sarudzo yekudzima iyi ICO nekushamisika.
Sezvo pasina munhu aifunga sarudzo iyi neTeregiramu, ndoda vashambadzi. Zvinotaridza kuti chikonzero chekudzimwa kweICO iyi ndechekuti kambani yakaunganidza mari yakawanda kubva kune vakasiyana varidzi vezvikwereti. Saka hauchadi kushandisa fomu iyi yekuunganidza.
Zvirinani izvi ndizvo zvavanotaura kubva kune dzakasiyana nhepfenyuro muUnited States. Asi Teregiramu pachayo haina kupa chero maitiro kusvika zvino. Saka isu tichafanirwa kumirira kwechinguva kuti tione chikonzero chechokwadi chekukanzurwa uku.
Muchikamu chekutanga chekuunganidza chakaitwa muna Kukadzi, iyo femu yakawana mamirioni mazana masere nemazana mashanu emadhora kubva kuvashambadziri makumi masere nemasere. Pakati pavo tinowana mari yemabhizimusi emabhizimusi senge Sequoia Capital kana Benchmark. Kutenderera kwechipiri kwakaitwa munaKurume, imomo zvakare vane mamiriyoni mazana masere nemakumi mashanu, mune iyi kesi kubva kune 94 ma investor akasiyana.
Saka kambani yakakwidza $ 1,7 bhiriyoni kubva kune mazana ma175 ma investor akasiyana. Chii chichaitika kumari yakaunganidzwa? Sezviri pachena ichashandiswa kune iyo Teregiramu Yakavhurika Network chirongwa. Kutenda chirongwa ichi, iko kunyorera mameseji kucharamba kuchipihwa mari uye mabasa matsva achaunzwa mariri.
Sezviri pachena Teregiramu haidi inopfuura 1,7 bhiriyoni kuvaka uye kuvhura Telegraph Vhura Network. Muchokwadi, mumakore matatu anotevera kambani iri kuronga kushandisa chete $ 400 mamirioni. Saka nemari yavakatowana vanokwanisa kubhadhara iyi ICO.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Noticias » Teregiramu inodzima ICO yayo mushure mekusimudzira 1,7 bhiriyoni emadhora
Samsung PRO Kutsungirira, akakwira-ekuita SD makadhi
LG G7 ThinQ, iyo mureza iyo inobhejera pane inozivikanwa Notch